प्रधानमन्त्री ओली नारायणहिटी अगाडी भाबुक हुनुको र’हस्य खोले सल्लाकारले,आँसुको अर्थ हो ? – Onlines Time
प्रधानमन्त्री ओली नारायणहिटी अगाडी भाबुक हुनुको र’हस्य खोले सल्लाकारले,आँसुको अर्थ हो ?
February 6, 2021 February 14, 2021 onlinestimeLeaveaComment on प्रधानमन्त्री ओली नारायणहिटी अगाडी भाबुक हुनुको र’हस्य खोले सल्लाकारले,आँसुको अर्थ हो ?
गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा शुक्रबार वर्षा र हिमपात भएको हो । मनाङ र मुस्ताङमा हिमपात हुँदा स्थानीयवासी घरबाहिर निस्केका छैनन् । माथिल्लो मुस्ताङमा एक फिटसम्म हिउँ जमेको छ ।
सदरमुकाम जोमसोम वरपरका डाँडाहरू सेताम्य देखिएका छन् । म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जा र अन्नपूर्ण गापा–६ घोडेपानीलगायत क्षेत्रमा पनि हिउँ परेको छ । हिमपातले हिउँदे बाली भने सप्रने भन्दै किसान खुसी भएको गुर्जाका वडाध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले बताए ।
मनाङको नासों गाउँपालिका–९ दानक्युदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा व्यापक हिमपात भएको छ । मनाङ ङिस्याङ, नार्पाभूमि र चामे गाउँपालिकामा एक फिटभन्दा पनि बाक्लो हिमपात भएको हो । हिमपातका कारण मनाङीहरू घरभित्रै बसेका छन् भने सडकमा सवारी आवागमन ठप्प भएको छ । हिमपातले आलु, फापर, गहुँ, जौ र उवालगायतका बालीलाई राम्रो गर्ने पिसाङका छिरिङ गुरुङले बताए । मनाङमा एक महिनाअघि अलि–अलि मात्र हिउँ परेको थियो । लमजुङ र कास्कीको उच्च भेगमा पनि हिमपात भएको छ ।
बागलुङको उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपातले जनजीवन प्रभावित भएको छ । ढोरपाटन, ताराखोला र तमानखोला क्षेत्रमा हिउँले सेतै भएका छन् । ढोरपाटन सिकार आरक्ष क्षेत्र र बोवाङ गाउँलगायतका डाँडा हिउँले सेताम्य देखिएका छन् । ताराखोलाको हिले, तमानखोलाको सोले र लामेला क्षेत्र र गल्कोटको घुम्टेमा पनि हिउँ परेको छ । हिमपातसँगै झरी परेपछि ती क्षेत्रका बासिन्दाले पशुलाई चरनका लागि बाहिर निकालेका छैनन् ।
तीन गाउँपालिका रहेको लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वमा सबै डाँडा सेताम्य देखिएका छन् । दर्जनभन्दा बढी गाउँ हिउँले ढाकिएका छन् । भूमे र सिस्ने गाउँपालिकाका अग्ला बस्ती सेताम्य छन् । हिमपात र वर्षासँगै चिसो बढेको छ । कात्तिक अन्तिम साता वा मंसिरको पहिलो सातामै हिमपात हुने यहाँका हिमाल माघको अन्तिम साता मात्र सेताम्य बनेका छन् । जिल्लामा यसपटक भने सबैतिर नभएर अग्ला बस्ती र हिमालमा हिमपात भएको भूमे गाउँपालिका–२ का कमानबहादुर बुढामगरले बताए । ‘सुक्खा डाँडा बिहान सेताम्य देखिए,’ उनले भने, ‘यस वर्ष हिउँ पर्दैन कि भन्ने लागेको थियो, ढिलै भए पनि हिमपात भयो ।’
मुगुको छायानाथ रारा–९ मुर्माका रनवीर रोकायाको मुहारमा धेरैपछि खुसी छाएको छ । लामो समयको खडेरीले गहुँ, जौलगायत बाली सुक्न थालेपछि चिन्तित बनेका उनलाई शुक्रबारको हिउँले राहत दिएको हो । ‘लामो समयदेखि हिउँकै प्रतीक्षामा थियौं,’ उनले भने, ‘हिउँले सुबिकालको आशा पलाएको छ ।’
नायिका स्वेता खड्कालाई फेरी आइलग्यो यस्तो संकट फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै पोखिन आफ्नो पिडा
टेक्सासमा ३० बर्षका कुमार केसीको अचानक नि’ धन, परिवारलाई सहयोगको अपिल [सक्दो सहयोग गर्नुहोस]